4 ezinye iindlela ezizezona zingasetyenziswanga simahla se-youtube ye-iphone kunye ne-ipad
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo 4 ezona ndlela zisimahla ze-YouTube ezizezinye ze-iPhone kunye ne-iPad
4 ezona ndlela zisimahla ze-YouTube ezizezinye ze-iPhone kunye ne-iPad
Inkonzo zikaGoogle kunye neapos; yeYouTube yeyona webhusayithi idumileyo yemithombo yevidiyo ngaphandle - akukho mathandabuzo ngaloo nto. Ukusuka kumxholo owenziwe ngumsebenzisi we-amateur, ukuya kwiividiyo ezizi-semi-pro kwi-plethora yeendidi ezahlukeneyo, iiklip zobungcali, kwaye, ewe, uninzi lweevidiyo zomculo. Wonke umntu osebenzisa i-Intanethi rhoqo ubukela ubuncinci iklip yeYouTube ngosuku. Ngokwendalo, le nkonzo ihlala isetyenziswa kwii-smartphones kunye neepilisi, njengakwi-post-PC era, abasebenzisi baya kuhlala bezisebenzisa ezo media kwizixhobo zabo eziphathwayo. Kwaye, ewe, kukho ii -apps ezisemthethweni zikaYouTube, ezenziwe nguGoogle, kuzo zombini iinkqubo zokusebenza kwe-Android kunye ne-iOS.
Kwaye ungazenzi kakubi - usetyenziso lujongeka kwaye lusebenza kakhulu. Nditsho naku-iOS, okhuphisana naye onzima kuGoogle & apos; eyakhe i-Android, usetyenziso lweYouTube, phakathi kwezinye iinkqubo zikaGoogle, yimbaleki eyilelwe kakuhle. Ke kutheni umntu efuna enye indlela, ii-apps zomntu wesithathu, akunjalo?
Ewe, kukho imicimbi embalwa ngeYouTube & apos; usetyenziso olusemthethweni. Okokuqala, uninzi lwakho lungaqaphela ukuba ukunciphisa usetyenziso kuya kuyeka kwangoko ukudlala. Oku kuthetha ukuba awukwazi ukumamela iividiyo zomculo ngelixa usenza enye into kwi-iDevice yakho, okanye xa isikrini sayo sicinyiwe. Kukho izizathu ezilungileyo zoku - inzuzo ye-YouTube kunye neapos ziveliswa yingeniso yentengiso. Ke, ngokwendalo, inkonzo ifuna ukuba ujonge kwiintengiso zayo, endaweni yokuba ubenayo ngasemva. Kananjalo kunokucingelwa ukuba uGoogle akayithandi into yokuba abathengi basebenzise inkonzo njengonomathotholo, ngokudlala uluhlu lwadlalwayo lomculo, endaweni yendawo yokubamba ividiyo. Ngokukodwa xa ucinga ukuba iGoogle Play Music ikhona. Ewe, uninzi lwee-apps zeqela lesithathu zivumela ukudlala ngasemva, ngelixa iapp iyancitshiswa okanye isixhobo silele.
Ngoku, asitsho ukuba umntu makaye kwi-adventure yakhe yokuphanga iYouTube yonke ingeniso yentengiso. Kodwa ngamanye amaxesha kuyacaphukisa xa umntu efuna ukunciphisa iapps imizuzwana nje embalwa- ukuphendula umyalezo, jonga imeyile, okanye ikhalenda. Ikliphu iyayeka ukudlala, emva koko ifuna ukuqalwa kwakhona, kwaye ngamanye amaxesha ibuyela kwiscreen esimnyama kwaye kufuneka iphinde ibambe kwakhona. Kuphula nje amava.
Isizathu sesibini sokuba umntu afune i-app ye-YouTube yeqela lesithathu yi-iOS 9 & apos; imo entsha yomfanekiso-mfanekiso. Ukuza kuthi ga ngoku, ukujonga iziqwengana kwi-YouTube okanye kwiYouTube site ngeSafari iya kuphehlelela kumdlali okhethekileyo, ongenalo iqhosha lomfanekiso we-iOS. Ukufumana iqhosha elithethiweyo, umntu kufuneka adlale ividiyo ye-YouTube ngomdlali we-iOS ophetheyo. Ewe, kuyenzeka nje ukuba uninzi lwee-3rd party YouTube zisebenzise.
Siqala kolu luhlu sisebenzisa i-app ekuyo kuphela evumela umfanekiso-mfanekiso we-iPad Air 2. Oko kulungile, ngelishwa, uninzi lweqela lesithathu le-YouTube zisetyenziselwe iintengiso kwaye ziyilelwe kakubi, ngakumbi ezo zisebenzisa ii-iOS kunye neeapos; Isidlali esinamaqhosha emifanekiso-kumfanekiso. Ngaphandle kwabo sivavanyileyo, sifumene i-MyTube ukuba ibe lula ngokwaneleyo ukuhamba, ngaphandle kokulahla ii -apps ezizele-screen ebusweni bakho ngalo lonke ixesha linakho. Njengebhonasi eyongezelelweyo, unokukhetha ummandla osilelayo ii-vids ezicetyiswayo ezinxulunyaniswa nazo, ke ukuba unomdla wokwazi ukuba yeyiphi na & apos eyaziwayo kwilizwe langaphandle, okanye ikhutshiwe zii-vids ezidumileyo ozibonayo zivela kwelakho- ungayitshintsha .
Umdlali weTyhubhu une-mashup ye-classic-ish kakhulu ye-YouTube kunye noyilo lwe-iOS. Kuthatha ithutyana ukufunda ukuhamba-hamba, kodwa nje ukuba umntu asongele intloko ngeenxa zonke, iapps inikezela ngeempawu ezintle. Ukutsala umnwe phezulu nasezantsi ngaphezulu kwevidiyo yewindows yokulawula ivolumu, ngelixa uswayipha ngasekhohlo okanye ngasekunene uya kutsiba uye phambili okanye ubuye kwividiyo imizuzwana eli-10. Uhlelo lokusebenza lubonelela ngemvelaphi yesandi, kunye nokukwazi ukukhetha indawo yakho emiselweyo ngokunjalo.
INetTube ayisiyo & apos; intle kakhulu okanye iyalelwe kakuhle, kodwa inika abasebenzisi amandla okukhangela kuzo zombini iYouTube kunye ne SoundCloud. Uhlelo lokusebenza lujolise kumculo kwaye, ewe, lubonelela ngokudlala ngasemva. Ukongeza, kukho useto 'lokulala', oluya kuyeka ukudlala emva kwexesha elimiselweyo lomsebenzisi. Izandi zilungile kwabo bathanda ukulala kumculo wokulala ozolileyo.
IMcTube inebume beklasikhi kwaye ivumela abasebenzisi ukuba batshintshe indawo yabo emiselweyo. Umdlali wayo akabalulekanga ngokukodwa- akukho zimbo zomzimba okanye umfanekiso-mfanekiso apha- kodwa unezinto ezimbalwa eziluncedo, ezinjengokuphinda, ukulala, kunye nokukwazi ukudlala iaudiyo kuphela- ngeenjongo zokugcina idatha, sicinga njalo. Ngokwendalo, ikwadlala umsindo ngasemva.
Ulwesihlanu omnyama ukubukela amaapile
ukubukela umnyele nge-3 41mm vs 45mm
Ababhalisi beT-Mobile banokugcina ukuya kuthi ga kwi-400 yeedola kwi-Apple iPhone 7 kunye ne-iPhone 7 Plus
I-Apple iPhone XS Max: ukungabikho kwebhokisi kunye nokujonga kuqala
I-Apple iPhone 7/7 Plus imingxunya yebhokisi engafunekiyo yeJet Black vs matte emnyama yokupakisha
Ubusazi? I-Apple yayingeyiyo inkampani yokuqala yokuthengisa ii-iPhones